Qualcomm na-ekwupụta Snapragon 820, 617 na 430 Chips | Gam akporosis
N'afọ a, anyị nwere ezigbo ọgba aghara na ngafe okpomọkụ nke Snapdragon 810 mgbawa na were ọtụtụ akụkọ ịdọ aka ná ntị banyere nsogbu ndị a mgbawa nọ na-enye. Ihe pụrụ iche banyere nsogbu ahụ bụ na n'oge ahụ Qualcomm ibe mgbe na-akpa àgwà n'ụzọ dị ukwuu, nke mere na ekpo oke ọkụ nke otu mgbawa ahụ, ka anyị kwuo na a gaara "agbaghara ya." Ndị na-agbagharaghị ha bụ Samsung gara n'ihu na-agbago Exynos mgbawa ya na Samsung Galaxy S6.
Taa ụlọ ọrụ ekwuputala usoro nke ibe Otu n'ime ha bụ Snapdragon 820, ndị ọrụ ya maka ọnwa ndị na - abịanụ na nke ahụ nwere ikike maka oke ọsọ LTE nke nbudata 600 Mbps na 150 MBps bulite site na modem X12 LTE ọhụrụ. Nke a mgbawa na-anọchi anya maka nanị teknụzụ na-enyere antenna nke ntị na a dara imewe, nke na-enyo na dobe oku ga-ebelata na ga-ọbụna-eduga ala ike oriri.
1 A Snapdragon 820 maka LTE
2 Snapdragon 617, 430 na Ndenye Nchaji 3.0
A Snapdragon 820 maka LTE
Ọzọ nke obere omume ọma na nke a mgbawa nwere bụ na ụlọ ọrụ emeela ka njikọ oku dịkwuo elu mgbe ịgbanwee n'etiti Wi-Fi na LTE. O doro anya na Qualcomm ekwuola banyere omume ọma na uru nke ọsọ LTE nke ọhụụ ọhụrụ ya, nke na-enye ndị ọrụ ohere ịnweta 4K Ultra HD vidiyo vidiyo, na-enyo enyo na TV gị ma ọ bụ ihe ga-abụ ibu ibu nke foto niile ewere na ihe omume.
Uru Wi-Fi Smart na-akpọ bụ maka modem X12 LTE iji lekọta akpaghị aka họrọ n'etiti LTE na Wi-Fi dabere na njirimara nke mgbaàmà ahụ na mkpuchi nke nwere ma ọ bụ na njikọ abụọ a.
Snapdragon 617, 430 na Ndenye Nchaji 3.0
The Snapdragon 617 na Snapdragon 430 ibe-abịa na lekwasịrị anya n’etiti etiti na mbido ya nwere Cortex-A53 na octa-isi akụrụngwa nwere ọsọ ruo 1.5 GHz maka 617 na 1.2 GHz maka 430. Ihe eserese bụ Adreno 505.
Ihe anyị na-ahụkarị na ibe atọ a bụ na niile na-enye nkwado na ọkwa ọhụrụ Ndenye Ọhụrụ 3.0. Standardkpụrụ a gbasaa nhọrọ maka ịbudata ikike site na 5V, 9V, 12V na 20V na Ndenye Ndenye 2.0 gaa n'ọtụtụ site na 3.6V ruo 20V na ntinye 200mV. Nke a bụ n'ihi algorithm ọhụrụ nke na-enyere aka ịchọpụta ike ole kwesiri iru na ngwaọrụ ọ bụla na oge enyere.
Nke a nwere nkwado maka nkwado azụ na teknụzụ Ndenye Ndenye na njikọ USB Type-C. Gburugburu ihe ga-abụ oge nkwụ ụgwọ site na ihe ga-abụ site na efu ruo pasent 80 nke ụgwọ, nke ụfọdụ ngwaọrụ ga-eru 90 nkeji, yana Ndenye Ndenye 3.0 ọ ga-ewe naanị 35 nkeji. Kedu okpukpu anọ karịa usoro ịgba ọsọ ọsọ, ma ọ bụ ugboro abụọ ọkọlọtọ Ndenye ego na ruo 38 pasent jiri ya tụnyere Ndenye Ndenye mbu 2.0.
Chipsfọdụ ibe na-adịghị anya anyị ga-amalite ịhụ na ngwaọrụ ọhụrụ nke sitere na ọtụtụ ndị na-emepụta ihe nwere gam akporo dị ka ihe mgbaru ọsọ ha maka ọnwa ole na ole sochirinụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Qualcomm na-ekwupụta Snapdragon 820, 617, 430 na Quick Charge 3.0 ibe
[APK] Otu esi etinye Photoshop Mix na Tablet gam akporo